शुक्रबार ६ उडानबाट ९ सय बढीलाई काठमाडौँ ल्याईयो, कुन एयरलाइन्सबाट कति ? – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १४:२३ English
काठमाडौँ, १९ असार । शुक्रबार ६ वटा अन्तराष्ट्रिय उडानमार्फत विभिन्न देशबाट ९१७ जनालाई काठमाडौँ ल्याईएको छ । नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्ससहित ५ विमान कम्पनीका ६ उडानमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीको उद्दार गरिएको हो ।
निगमको जहाजमार्फत कतारको दोहाबाट १४५ जना, हिमालय एयरमार्फत आवुधाबीबाट १४२ र नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमार्फत दुबईबाट १४७ जनालाई काठमाडौँ ल्याईएको हो । क्वालालम्पूरबाट मालिण्डो एयरमार्फत १७६ जना, दोहाबाटै कतार एयरमार्फत १४० जना र सारजाहबाट एयर अरेबियाको जहाजमार्फत १६७ जनालाई काठमाडौँ ल्याईएको हो ।
आज कतार एयरवेज भने २४८ जना यात्रु र ४ जना बच्चाहरु बोकेर फर्किएको छ ।
चैत्र ११ देखि जारी भएको लकडाउनका कारण नेपालमा रोकिएका विदेशीसहित १२ हजार ४०८ जना यात्रु विदेश प्रस्थान गरेका छन् ।
१९ असार २०७७, शुक्रबार २०:१९ मा प्रकाशित